प्रविधि - साप्ताहिक
एकराज सुवेदी, फाल्गुन २८, २०७४
गत फेब्रुअरी ९ देखि १४ तारिखसम्म भारतको दिल्लीमा सम्पन्न अटो एक्स्पो–२०१८ मा ६ लाख ५ हजार १ सय ७५ अवलोकनकर्ता उपस्थित थिए । सधैं झै यो वर्ष पनि अटो एक्स्पोलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । ग्रेटर नोयडाको इन्डिया एक्स्पो मार्टमा मोटर शो अर्थात् नयाँ कार तथा मोटरसाइकलहरू प्रदर्शित थिए भने नयाँ दिल्लीस्थित प्रगति मैदानमा अटो पार्ट्स तथा कम्पोनेन्टको प्रदर्शनी भएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
नितेश उपाध्याय, कार्तिक ६, २०७४
सुरुमा गुगलको ब्लगर, वर्डप्रेसजस्ता निशुल्क साइटमा एकाउन्ट बनाउनुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो चाहनाअनुसारको ब्लग डिजाइन गर्नुपर्छ र लेख्न थाल्नुपर्छ । कमाउनका निम्ति आफूले धेरै भन्दा धेरै पाठक भने तान्न सक्नुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
आभाष अधिकारी , कार्तिक ५, २०७४
घरमै इन्टरनेट छ भने माइक्रोवर्कस्मार्फत पनि सानोतिनो आम्दानी गर्न सकिन्छ । कामअनुसार प्रत्येक कामबाट माइक्रोवर्कस्मार्फत केही सेन्टदेखि केही डलरसम्म प्राप्त हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
खिम लामिछाने, असार २७, २०७४
मिनेट–मिनेटमा स्टाटस अपडेट गर्छन् । जे कुरामा पनि बीचमा बोलिहाल्नुपर्ने, आफ्नो विचार व्यक्त गरिहाल्नुपर्ने यिनीहरूको बानी हुन्छ । यिनीहरूलाई हटाउनु पर्दैन । यिनीहरूबाट देश–विदेशमा के घटना घट्यो भन्ने कुरा तुरुन्तै थाहा पाउन सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
लाइफस्टाइल अनलाइन नेपालमा
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन २२, २०७३
आइएमबेसरम डटकमले नेपालमा आफ्नो फ्रेन्चाइज सुरु गरेको छ । विश्वकै विशेष अडल्ट लाइफस्टाइल स्टोरका रूपमा सुपरिचित आइएमबेसरम डटकमको मुख्यालय अटलान्टा, जर्जियामा छ । पुरा पढ्नुहोस्
स्मार्ट शैलीबाट नतिजा
गत शनिबार एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि नतिजा हेर्न रमेश बरालले खासै हतार गरेनन् । पुरा पढ्नुहोस्
के क्यासलाई राखेर कम्प्युटरको क्षमता बढाउन मिल्छ ?
डा. सूदन झा, असार ४, २०७२
कम्प्युटरमा थुप्रै सब–सिस्टम हुन्छन् । तीमध्ये पनि थुप्रैका बीचमा क्यास राखेर कम्प्युटरको प्रदर्शनलाई सुधार्न सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
ओहो बजार एउटा अनलाइन गन्तव्य
एकराज सुवेदी, असार ४, २०७२
तपाईंसँग हातमा स्मार्टफोन छ, तर पनि अर्को स्मार्टफोनको खोजीमा हुनुहुन्छ ? कि गाडी वा मोटरसाइकल किन्ने विचारमा हुनुहुन्छ ? पुरा पढ्नुहोस्
सोसल मिडियाको बढ्दो प्रयोगका कारण मानिसको सेक्स लाइफमा असर पुग्न थालेको छ। पुरा पढ्नुहोस्
यसको कारण के हो होला?
डा. सूदन झा, जेष्ठ ३२, २०७२
युजरले मेल पठाउँदा प्राप्त गर्नेको मेलिंग ठेगाना टाइप गरेको हुन्छ। यसको अर्थ युजरको इमेल सिस्टमले ठेगाना उल्लेख भएको मेल प्राप्त गर्ने पुरा पढ्नुहोस्